Jahwareer ka taagan guddiga doorashooyinka Galmudug | KEYDMEDIA ONLINE
Jahwareer ka taagan guddiga doorashooyinka Galmudug
Madaxweynaha dowad goboleedka Galmudug Axmed Qoorqoor ayaa dib ugu laabtay Dhuusamareeb, isagoo aan weli gudbin magcyada xubnaha ku matalaya guddiga doorashooyinka.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Qoorqoor ayaa dib ugu laabtay caasimadda Galmudug ee Dhuusamreeb kaddib safar uu muddo uga maqnaa magaalada Muqdisho.
Axmed Qoorqoor, madaxweynaha Galmudug ayaan weli gudbin liiska magacyada xubnaha guddiga doorashooyinka ku matali lahaa Galmudug iyadoo ay jiraan is faham la'aan la xiriirta xubnaha guddiga taasoo u dhaxaysa madaxweyne Qoorqoor iyo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo.
Keydmedia Online ayaa heshay Macluumaad ku aaddan in Qoorqoor lagu cadaadinayo in xubnaha Galmudug ku matalaya guddiyada doorashooyinka iyo xallinta khilaafaadka lagu yeesho talo, oo xubnahaasi qaar kamida loo soo dhiibo, halka uu isaguna doonayo inuu soo xulo xubnahaasi oo aysan talo ku yeelan Fahad iyo Farmaajo oo markii horeba talo ku lahaa guddiyada doorashooyinka saddex maamul goboleed ee kala ah Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug.
Isfahan darrida ka dhex taagan Qoorqoor iyo Farmaajo ayaa waxay sababtay in aan weli lasoo gudbin xubnihii Galmudug ku matali lahaa guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo xallinta khilaafaadka.
Qoorqoor oo markii hore aaminsanaa is xulufeysiga kala dhaxeeya dowladda dhexe ayaa isbadal uu ku yimid fikirkiisa, iyadoo lagu soo warramayo inay u badan tahay inuu kamid noqdo xulufada mucaaradka oo aan awood badan lahayn iyaga naftooda.
Jiitan xoog leh ayaa ka muuqdo doorashadii lagu ballansanaa in si deg-deg ah loo guda galo, waxaana caqabadda koowaad ah in aan lasoo dhammeystirin xubnihii guddiyada doorashooyinka.